iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #1006 by cunnah37
Mna ndim nguKristi waseBlackpool, ndandihamba ngeemoto iminyaka emininzi. Uqaliswe nge-fs98 kwaye uphumelele kuzo zonke izinto ezivela kuyo. Utshintshile kutshanje kwi-FSX xa sinePC entsha esakwazi ukuyiqhuba ngokufanelekileyo. Jabulela iindiza ezincinane nje ngokuba andinaso ixesha elide. Ufumene le ndawo efuna iilveries ze-aircraft engapheliyo kwaye njengokuba kulula ukusetyenziswa ngoku kuluhlu lwam intandokazi.
Ixesha ukwenza page: 0.270 imizuzwana